Galmee Seenaa Irraa: Araarsitoota moo diigdoota? 20101016 - Welcome to bilisummaa
Galmee Seenaa Irraa: Araarsitoota moo diigdoota? 20101016
Mooraa qabsoo Oromoo tazgabbeessina, Tokkummaa finna, laafinarraa gara jabinaatti ceena…ka si dinqu warra kana moo? warra salfii galee jara bara dheeraa sammuu ummataatti taphataa bahe kanaaf harka rukutu?
Previous Dr.Diimaa Nagaoo: “ABOn akka malee natti jabaadha”
Next Qabsooytuun Sabaa isin Yaamte yaa ilmaan Oromoo!!